A na-akpọkwa ụdị a Hexagon Flange Nut paịd nut, ifuru - nut tooth, flange nut na ndị ọzọ. A na-ejikarị ya maka njikọta ọkpọkọ ma ọ bụ maka iberibe ọrụ ndị dị mkpa iji bulie nri kọntaktị elu. Ejiri ezigbo ngwaahịa rụọ ya nke ọma. Ọ bụ ihe eji ejikọ ọnụ nwere eriri dị n'ime ma jiri ya mee ihe na njikọta, a nwekwara ike iji ya dị ka akụkụ nke arụ ọrụ nke ejiri ya mee ihe na ntanye iji nyefee ngagharị ma ọ bụ ike.
A na-eji ụdị carbon carbon steel zinc plated Square nke ọma mee ezigbo carbon steel na ezigbo ọrụ aka. A na-eji okpukpu nke zinc kpuchie elu ya. Ọ na - ejikọ ọnụ na eriri ma ọ bụ kposara) na mpụga mpụga ma jiri njikọ dị n'ime na mpụga iji mee ka akụkụ abụọ ejikọtara ọnụ, ihe ndị ọzọ, wdg. Mgbe ị na-agbakọ ma na-ekpochapụ Carbon steel Zinc Plated Square Nut na wren, ọ naghị adị mfe ịghasa, kama ị nwere ike iji igwe mgbapu mgbazigharị, spanner nwụrụ anwụ, ebumnuche abụọ (mmeghe), ma ọ bụ oghere ọkpọ pụrụ iche nke oghere maka mkpọkọta na mgbasa.
Anyị na-echekwa ọnụọgụ din931 hex bolt. Mpempe isi ndị a dị na eriri nwere eriri akụkụ ma kechie ogologo oge niile dabere na DIN 931 na DIN 933 bụ zincanized maka nchekwa corrosion.
Kedu ihe mkpọchi mkpọchi nke ahụ bụ: ịdabere na nylon washer na ọrụ nke njigide nut, naịlọn mkpọchi ahụ, a na-akpọkarị ụlọ ọrụ ahụ “okpu.” N’ezie na ịghasa eri ma ọ bụ ihe nkwụchi ahụ, dị ka naịlị mgbe mgbachi mkpọchi ga-apụ nke odidi, uzo abuo a na emechi onu ogugu.
Aha njirimara ịgbado ọkụ na ụdị Model M4-M36 Ihe: Carbon steel Grade 4.8 8.8 Eriri wea, dịkwa mma
Aha Ngwaahịa Elu Carbon steel M2-M100 ihe eji eme ihe dika ihe ichoro. Grade Grade: 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 Mgbo Etuchasị Efu, Efere, (ROHS) Zn-plated, Ni-plated, Dị ka ihe ị chọrọ. Standard DIN GB ISO JIS BA ANSI Asambodo ISO9001, SGS, CTI, ROHS Non-ụkpụrụ OEM dị ma ọ bụrụ na ị na-enye onyonyo ma ọ bụ ihe nlele.
Aha Ngwaahịa Dip Galvanizing hex bolt Size M2-M160 Carbon steel, igwe anaghị agba nchara, Dị ka ihe ị chọrọ. Grade Grade: 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 Ect Sur Fin Finin Plain, passivated, (ROHS) Zn-plated, Ni-plated, Dị ka ihe ị chọrọ. Standard DIN GB ISO JIS BS ANSI Asambodo ISO9001, SGS, OEM nke anaghị akwado ụkpụrụ dị ma ọ bụrụ na ị na-enye eserese ma ọ bụ ihe nlele. Nchịkwa mbupu ngwungwu dị ọcha ma ọ bụ dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị ...
Kpoo aha onye na-emeputa ihe ngwa ngwa puru iche na-egbochi izu ohi na nri Mark Dịka ihe ndị ahịa chọrọ. Ngwongwo igwe anaghị agba nchara, carbon steel Finin Plain, zinc steel, black quality Top high Anticorrosive Performance Salt Spray Test Reach 1000-2000 Hours Ngwaọrụ, Chemical ụlọ ọrụ, gburugburu ebe obibi, Asambodo ISlọ ISO9001 2008 igbe mbukota & pallets ma ọ bụ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Oge nzipu Dika n’afọ 15…
Anyị na-echekwa ọnụọgụ din931 hex bolt. Mpempe isi ndị a dị na eriri nwere eriri akụkụ ma kechie ogologo oge niile dabere na DIN 931 na DIN 933 bụ zincanized maka nchekwa corrosion. ika: JiuHe M16 size din931 hex bolt, M20 dayameta din931 bolt, M24 din931 ọkọlọtọ hex bolt, m30 din 931 hex bolt, niile nọ na ngwaahịa. A na-eji ya eme ihe na mpaghara niile nke ụlọ ọrụ izugbe.
Hex nut DIN985 DIN982 DIN934 Ihe Carbon steel Surface treatment Plain, zinc steel (ọcha, odo), black oxide Size M3-M56 Grade 4.8 8.8 Sample Anyị nwere ike ịnye ndị nlele MOQ 1 TON / dịka onyinye ndị ahịa chọrọ ngwugwu Carton, pallet oge ịkwụ ụgwọ Oge nnyefe T / TL / C Ihe dị ka 15-30days ma ọ bụ dị ka olu Ahịa USD kwa Ton FOB / CIF / CFR / EXW Uru Anyị bụ ụlọ ọrụ nke DIN934 hex n ...